Kuyini isizwe? Ngokuvamile, kulula ngokwanele ukuba siphendule lo mbuzo. Nation - kuyinto isitebele, umphakathi ngokomlando uyayenza zabantu. Futhi ngempela kuyiqiniso. Nokho, akwanele. Yini kuleli cala lihlukile abantu? Phela, abantu - liphinde umphakathi ozinzile ngokomlando zabantu. Mhlawumbe, kumele impendulo wafuna kakhulu. Ngakho into yokuqala singazi ake ukubhekana nalabo, yini abantu.
Lo mqondo esetshenziswa abantu isikhathi eside. Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu - kuba esitebeleni, umphakathi ngokomlando athuthukile zabantu enamalungu axhunyiwe ephilayo endaweni efanayo, umsuka ezivamile, lenye imvelo evamile kwamasiko. Ngezinye izikhathi ehlukahlukene kwakukhona ukubekezelelana ezahlukene kakhulu abantu ethile. Ngokwesibonelo, eGreece yasendulo, abantu kuqhathaniswa amaGreki namaqaba. Okungukuthi, bezizwe zonke ababekhuluma isiGreki. EYurophu lehla ngokushesha inani Ephakathi abantu babebhekwa njengezinhlanya isigaba nelungelo ababe isisindo okuphawulekayo isakhiwo somphakathi amakhosi asendulo. abantukazana eziningi livele aristocrats black ezifanayo kuwo wonke amagumbi aleli zwekazi. Namuhla, abantu - akusiwona ngisho nje umphakathi ozinzile zabantu. Ngakho shayela isimiso, izakhamuzi zombuso eyodwa. Ngisho noma izigaba ezahlukene izakhamuzi basonta ezahlukene ngokuphelele amasiko, izinhlanga, izizinda ezahlukene. Eyokuqala umbandela yisakhamuzi imele namuhla.
Futhi iyini isizwe?
Lo mqondo liseduze kakhulu umqondo abantu. Futhi ezihlobene kuye. Nokho, isizwe siyaqonda njengoba into eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, lesezingeni uhlobo lwemfundo. Ngempela, zonke izazi zanamuhla magazini aveze ukuthi ukuvela zezici zesizwe ezivamile ambalwa evame ukubuzwa yibo bonke amalungu ayo (njengoba kunjalo nabantu), zidingeka ngokushesha ingxenye ngokwengqondo kuchazwa ungubani. Nations Okokuqala eladabuka Europe esikhathini ngezikhathi zanamuhla. Le nkathi kwakubaluleke kakhulu ngokoMthetho kabusha of imiphakathi Izwe Elidala. Uhlelo lwe-capitalism waphula uhlelo akusebenzi of ubudlelwano amakhosi asendulo, esikhundleni ubunikazi bendawo uma umninipulazi okuhambelana uqobo kuphela emzaneni ayo kanye master, ukudala entsha, ungubani ngaphezulu emhlabeni jikelele. umphakathi wendabuko babhujiswa ngaphakathi amakhulu ambalwa eminyaka, futhi esikhundleni sabo kwaphakama entsha, lapho ukusebenza waseLyons waqala ukuzizwa ubumbano kumabhalane esuka eMarseilles, yize kwakudingeka ngalutho, ngaphandle izimpahla umphakathi owodwa onobunye - isiFulentshi. Omunye wabacwaningi zalesi simo, Benedict Anderson, kuchazwe ngokufanele isizwe ngengqondo (ngamanga) umphakathi. Futhi lokhu kuyiqiniso ngomqondo wokuthi lokhu, umphakathi ozinzile ngokomlando athuthukile abantu, eqinisweni, ukhona nje ezingqondweni amalungu ayo. Lokho ukuhlonza nokuqaphela ezivamile isiphetho zomlando isithakazelo eminye kukhona isiqinisekiso ngendlela ebaluleke kakhulu, njengoba abameleli isizwe kukhona kubo uma bakhulume izilimi ezihlukahlukene, inomsuka ezahlukene, imibono yenkolo ngisho uthuthele ku kwamanye amazwe. isizwe zezombusazwe nobuzwe
Nokho, kubalulekile ukuphawula ukuthi namuhla ukwehlukanisa izinketho izethulo ezimbili izizwe - lo yobuhlanga nezombusazwe. Okokuqala - lokhu esitebeleni, umphakathi ngokomlando athuthukile abantu ngesisekelo a igazi isizwe. Izibonelo zakudala kukhona amaJalimane nabasePoland, kusukela ezweni yabo nokumela collective kubaluleke kakhulu kuyinto consanguinity. Ngesikhathi esifanayo, ukuhwebelana kwembulunga yonke emhlabeni futhi mass kufuduka emenza isidingo ukuhlanganiswa izakhi angaphandle, ibandla lezizwe. Ngokwesibonelo, ngo- the ukwazi mass zaseFrench esine yabo kungaba kahle labo okhokho zazivela emazweni Maghreb. Yiqiniso, ukuze benze lokhu, kumele ahlukaniswe nezifiso komlando isiFulentshi, futhi yena bazicabangele njengabangcono yingxenye yazo.
Izikhungo zomphakathi: indzima nemisebenti
Yini ukupheka kusuka amawolintshi: izithelo candied ekhaya
Kanjani ukuze kuthuthukiswe i-Windows 10: imfundo, iseluleko kanye nokubuyekeza. Windows 10 Ngingabuyekeza?
Craquelure ukuvenisha - manicure okwamavila.